Faransiiska oo Dalbaday in lala Dagaalamo kooxaha ku Sugan Wadanka Liibiya - iftineducation.com
Faransiiska oo Dalbaday in lala Dagaalamo kooxaha ku Sugan Wadanka Liibiya
iftineducation.com – Madaxweynaha France, François Hollande ayaa sheegay in dowladiisa ay dagaal dheer la geli doonto kooxo Islaamiyiin ah oo uu sheegay inay hada kusii xoogeysanayaan wadanka Liibiya.
Hollande ayaa shaaciyey in Militariga France uu saldhig cusub ka sameysan doono waqooyiga dalka Niger meel aan ka fogeyn xaduuda koonfureed ee Liibiya, si ay ulla dagaalamaan kooxaha Islaamiga ah ee xarumaha ka kuleh dalka Liibiya.
Arintan waxaa la qabo Faransiiska dalal iyo Hogaamiyaal badan oo Afrikaan kuwaas oo horay u dalbaday in huwan la keeno dalka Liibiya.
Dalka Liibiya ayaa fowdo galay tan iyo markii la riday nidaamkii kaligii taliska ahaa ee Mucamar Al-qadaafi sanadkii 2011-kii.
Dalka Senegal ayaa ku baaqay dalalka dariska sida Chat, Mali, Muritaaniya, Burkinafaso ay ciidamo usoo diraan dalka Liibiya.
François Hollande ayaa ku dooday in maleeshiyaadka ku sugan Liibiya ay yihiin kuwa hubka usoo gudbiyey kooxaha islaamiga ah ee ka dagaalamaya wadamada Mali iyo Nigeria, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto xoogaga taakuleenaya jamhadahaasi oo saldhigoodu yahay Liibiya.
Goobta uu Faransiiska doonayo inuu saldhiga ka sameysto ee ah wadanka Niger ayaa ah dal xaduud laleh afarta wadan ee kala ah, Liibiya, Mali, Nigeria, Aljeeriya iyo Chad.
Caasimadda Taraabulis waxaa ka jirto Labo Xukuumad oo mid walba ay sheeganayso in ay tahay mida sharciga ah, waxaa intaa dheer maleeshiyaad ka taliyo gobolada, Gobolo doonaya in ay gooni u go’aan iyo Qabiilo ku caasiyad dowlada.
Dadka Liibiya oo qabaa’il u badan ayaa galay xaalad dagaal sokeeye taas oo dadka wax indha indheeya ay ka deyrinayaan.
Reer Galbeedka ayaa ka walwalsan waxa ay ugu yeereen fowdada iyo argigixasada kasoo socota Liibiya.
Dalka Liibiya waxaa 40 sano ka talinayey Mucamar Qadaafi, Qadaafi 2011-kii ayaa laga taqalusay dal Qani ayuu ka tagay lakin dad kama tagin.
Weerar ismiidaamin ah oo caawa ka dhacay Magaalada Istanbul, markii haweeney isku qarxisay Saldhig Boolis (Daawo Sawirada)